Fiatrehana ny Covid-19: narindra ny fandraisana ireo marary | NewsMada
Samy manana ny andraikiny ireo ivontoerana napetraka ho fandraisana an-tanana ny mararin’ny covid-19. Mbola am-perinasa avokoa ireo toerana rehetra napetraka miara-miasa amin’ny tobim-pahasalamana misokatra andro aman’alina, araka ny tatitra nataon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Ho an’ireo olona marary tsotra tsy misy fahasarotana, azo tsaboina eny amin’ny CSBII ho an’ny eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina. Eo koa ny CMC-19 Andohatapenaka izay mandray azy ireny. An­koatra izany, ireo marary mitsabo tena any an-trano, saingy arahi-maso akaiky ny fivoaran’ny fahasalamany.
Afaka mandray an-tanana vonjy maika ireo olona efa sempotra ihany koa ny eny amin’ny CMC-19 Andohata­penaka, saingy alefa any amin’ny CTC-19 na eny amin’ny hopitaly izy ireny rehefa vita ny vonjy aina voalohany.
Ho an’ireo marary ma­nom­­boka sempotra kosa dia miditra avy hatrany amin’ireo CTC eny amin’ny CCO Ivato na eny amin’ny LTP Alarobia na eny amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina izy ireny.
Ankoatra ireo, mandray ihany koa ny CHRD Anosia­va­ratra, CHRD Itaosy, CHRD Ambohimangakely, CHRD Bongatsara, CHRD Andrama­sina ary ny CHRD Mahitsy.
Raha toa ka efa tonga amin’ny fahasarotana kosa ny tran­gan’aretina ka efa tena sempotra be ilay marary dia ampidirina sy tsaboina haingana eny amin’ny hopitaly le­hibe eny amin’ny CHU Ano­siala, CHUJRA Ampefi­loha, CHUJRB Befelatanana, CHU Ando­hatapenaka, CHU Fe­noarivo ary ny HOMI Soa­vi­nandriana.
Mankeny amin’ny CHU GOB Befelatanana kosa ny reny bevohoka misy soritr’aretina mampiahiahy.
Ho an’ny ankizy latsaky ny 15 taona dia eny amin’ny CHUMEA Ambohimiandra no mikarakara azy raha misy soritr’areina covid-19.
Afaka manatona ny CMC-19 Andohatapenaka sy ny CHUJRB Befelatanana ary ny CHUJRA Ampefiloha kosa ireo misy soritr’aretina ka hanao fitiliana PCR.
Marihina fa tsy mamoaka valim-pitiliana ny CMC-19 Andohatapenaka fa toerana hangalana singa entina hotiliana fotsiny ihany ka tsy tokony hiandrandra voka-pitiliana eny mihitsy ireo izay nankeny natao fitiliana.
Ho an’ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina covid-19 aorian’ny fitiliana dia mahazo soratra maro sosona miampy toromarika avy amin’ny “plateforme”. Tsy misy intsony ny famoahana “attestation” mikasika ny vo­katry ny fitiliana PCR fa ma­hasolo izany ny soratra maro sosona alefan’ny “plateforme”. Natao izany mba hialana amin’ny filaharana sy ny fivezivezena izay mety hanaparitaka ny aretina indray.